Top 10 Kachasị Myọcha fosets 2020-Kitchen fosets, ite filler, ụlọ ịwụ fosets
Home / Foset Guide / Top 10 Kachasị Myọcha fosets 2020
Top 10 Kachasị Myọcha fosets 2020
2020 / 10 / 09 nhazi ọkwaFoset Guide 2168 0
Ihe omuma usoro ihe omuma nke ihe omuma Manta mechiri ugbua $ 13 nde nke uzo A1 nke ndi Bessemer Enterprise Companies. Manta na-ekwu na ọ ga-etinye ego ahụ maka ọganihu ọrụ na mmelite ngwaahịa maka ihe kpatara na ọ dị ka ọ gbasaa gaa na ala ọhụrụ.
Ọmụma ihe ọmụma, nke jikọtara mmalite data, ihe na-eme ya, yana ọnọdụ ọ na-ada oge, na-eweta ọhụhụ dị mma ma mee ka ọ dịkwuo mfe ịkọwahie ihe ọzọ na isi rụọ ọrụ. Agbanyeghị omume dị iche na ụlọ ọrụ gaa na ụlọ ọrụ siri ike, yana naanị 20% nke mkpakọrịta na-ebipụta amamihe na nghọta nghọta, dị ka O'Reilly si kwuo.
Ihe kachasị mma bụ ịgbakwunye usoro maka imepụta na njikwa metadata n'ihu yana n'azụ ngwaọrụ, nke na-ewe nnukwu ọrụ na oge. Iji mee nke a, ngwugwu Manta na-eweta ọgụgụ isi tozuru etozu iji nyere aka na ọganihu, o doro anya na ọ na-ebelata oge iji kwalite mbọ mbọ ọchịchị na-eme ka ogo na nchekwa ọ bụla dị elu.
Manta na aru oru dika isi okwu nke nghota na agabighari n’ime ahia. Usoro nyocha a na - ejikọta ọtụtụ ihe mmetụta, na - agbakọta metadata iji wughachi usoro ọmụmụ niile. Enwere ike ijikwa usoro iji usoro ihe omume Manta, ma ịchụ nta nwere ike ịmepe ihe ụfọdụ. Ndị ahịa nwekwara ike nyochaa usoro ọmụmụ na ụdị dịgasị iche iche ma soro ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọrụ tụlee ya.
Atụmanya nwere ike ibubata metadata nke ha site na akụrụngwa dị iche iche na Manta ma nyochaa ọnọdụ nke mmetụta ma ọ bụ ihe ọmụma na-aga mgbe ọ bụla. Onye isi ala Tomas Kratky na-ekwu ikike ndị a na-abawanye njikwa njikwa azụmaahịa iji chee ndị ahịa ihu na steeti ọnọdụ gburugburu. Manta emewo ka mmeputa nke otu data di na ulo oru dika Teradata na Comcast jiri 30 pacenti ruo 40%, ebe ime ka ngbanwe usoro di nfe, dabere na Kratky.
“Ntuziaka ga-eme ka ọrụ a na-ekwughachi ugboro ugboro so n’etiti ọtụtụ mgbanwe mgbanwe mgbu nke njikwa data. Organitù dị iche iche n'akụkụ ọ bụla nke ụwa a na-alụso nsogbu a ọgụ, yabụ n'oge na-adịghị anya Manta nwetara ebe a ka m dịrị ndụ, "Kratky gwara email VentureBeat. “Lineage bụ gị efu ibe nke a data ochichi ihe omimi, tinyere ikike iji bulie ihe ibe ya elu nke akpaaka. Significantdị dị mkpa nke metadata na nkwado (nke a na-ezobekarị) n'etiti ihe ọmụma metụtara mkpakọrịta na-enyere ndị ahịa aka ịghọta n'ezie ma na-achịkwa gburugburu ha n'ụzọ mmemme.
Nke gara aga :: Izu ike ụlọ ego nwere ike họrọ foset ụdị Osote: Best Bathtub Rain Shower Foset Systems